သစ္စာအလင်း: August 2009
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 3:06 PM4မှတ်ချက်ရေးရန်
ဘုရားအနေကဇာတင် ပူဇော်ပွဲနှင့် တတိယအကြိမ်မြောက် ခင်ပွန်းကြီး ၁၀ ပါး ပူဇော်ကန်တော့ပွဲ
ချစ်ခင်လေးစားရပါသော ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ မှ ဓမ္မ မိတ်ဆွေများရှင့်----
ယခုလာမဲ့ စနေနေ့ မှာ အေအိုင်တီ -Asian Institute of Technology မြန်မာဗုဒ္ဓ ဘာသာအသင်း ရဲ့ ဘုရားအနေကဇာတင် ပူဇော်ပွဲနှင့် တတိယအကြိမ်မြောက် ခင်ပွန်းကြီး ၁၀ ပါး ပူဇော်ကန်တော့ပွဲ ကို ကျင်းပပြုလုပ် မှာ ဖြစ်ကြောင်း ဗုဒ္ဓဘာသာ အသင်းဥက္ကဋ္ဌ မချယ်ရီမျိုးလွင် ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ အတူ တကွ ပါဝင် ကုသိုလ်ပြုနိုင်ပါကြောင်း ထပ်လောင်းကြေညာ ပေးပါရစေရှင့်။
During this month, we, Myanmar Buddhist Association have already made many religious activities and donation well. We can successfully celebrate those activities mainly thanks to your co-ordination and contribution.
Now, again, you are warmly invited to join with us for the followingprograms.
1.) Program Name : A-Nay-Ga-Zar-Tin-Pwe for the Buddha
Date: : Saturday 22 August, 2009
Time: : 9am
Venue: :The Buddhist Prayer Room - SU 109 (Next to SU office)
No. of Monks :3Myanmar monks
2.) Program Name : Pay Homage Program to 10 Benefactors in life(Khin-Bon-Gyi sae parr pu-zaw-pwe)
Time: : 8pm
For the No.1 Program, we are going to donate rice and curry,9kinds offruits,9kinds of flowers to the Buddha, and rice and curry (Alms food) and money to3Myanmar monks (anyone we would like to donate robes are alsoavaillable and the robe price is 560Bahts).
For the evening program, our AIT alumini Ma Than Than Sein have already donated Khin-Bon-Gyi Sae Parr Books to all.
So, anyone, who would like to donate money and other things for the above programs, please kindly contact me via this email or my room phone or mobilephone.
Here is our heartfelt thanks to all of our Myanmar family memebers for yourkind collaboration with the AIT Myanmar Buddhist Association.Pls, let's do together good deeds again.
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 10:28 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
နိုင်ငံခြားသားများကို ဗုဒ္ဓတရားတော်များနှင့် မိတ်ဆက်ရှင်းပြပေးတဲ့ အခါတိုင်းမှာ ကျွန်မ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ဘဝက အ-သုံးလုံးကျေ လုပ်အားပေး အဖြစ်တစ်လတာ နေထိုင်စာသင် ပေးခဲ့ရသော ကျောင်းကုန်းမြို့နယ် အပိုင် တိုက်ကုန်းကျေးရွာ ကလေးကို လွမ်းဆွတ် သတိရ အားနာ လှပါသည်။
ကျွန်မ၏ ပင်ကိုယ်သဘာဝ တောလက်ကျေးရွာမှာ ပျော်ရွှင်ပါသည်။ ပွင့်လင်းရိုးသား ကြသော လေးစားချစ်ခင် တတ်သော မေတ္တာစစ်စစ် များကို ချိုမြိန် ရွှင်လန်းစွာ သောက်သုံးခဲ့ ရဘူးတာ ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါ။ ကိုယ်၊ နှုတ် စိတ်နှလုံး သုံးပါးလုံး လွတ်လပ် ပေါ့ပါးစွာ ရှင်သန်နိုင်ပါသည်။ ထိုစဉ်က ကျွန်မ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် တတိယနှစ် အတန်းတင် စာမေးပွဲဖြေအပြီး နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်မှာ အိမ်သို့မပြန်ပဲ ထိုရွာကလေးတွင် စာမတတ်သူများကို စာသင်လုပ်အားပေးခဲ့ပါသည်။
ဧရာဝတီတိုင်း ကျောင်းကုန်းမြို့ မှ ၃နာရီခန့်မော်တော်စီးမှ ပုဆိန်ပဲ့ ရွာကြီးသို့ ရောက်ပါသည်။ ပုဆိန်ပဲ့ မှ လှည်းလမ်းဖြင့် ကုန်းတွင်းသို့ ၃နာရီခန့်သွားမှသာ ရောက်ရှိနိုင်သော ကျေးရွာကလေးပါ။ အိမ်ခြေ ၅၀ခန့်သာရှိပြီး ပညာ အတတ်ဆုံး ရွာသားလေးဟာ ၉တန်းအများဆုံးပါပဲ။ ကျွန်မ၏ သူငယ်ချင်း ပုသိမ်သူ မလဲ့လဲံဝင်း နှင့်အတူ ကျေးရွာကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ အိမ်မှာ နေကြရပါတယ်။ တစ်ရွာလုံးမှာ ရေတွင်းတစ်တွင်းသာ ရှိပြီး ကျွန်မတို့ ရေဆင်းချိုးချိန် တစ်ရွာလုံး ဝိုင်းအုံကြည့်တာ ခံရတာ ကလွဲပြီး အဆင်ပြေပါတယ်။
ကျွန်မမှာစာသင်သား ၁၂ယောက် ရှိပါတယ်။ မသပြေသူ ဆိုတဲ့ သူစာရင်းသာဝင်ပြီး ရောက်မလာတော့ အိမ်လိုက်သွား တော့မှ အဆစ်အမြစ်ယောင် ရောဂါနှင့် လမ်းမလျှောက်နိုင်ပါ။ ရွာကလေးက ခေါင်လှတော့ အိမ်က ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ငွေသုံးရာ ဘယ်နေရာသုံးရမှန်း မသိ အရာမယွင်းခဲ့။ ဒါနဲ့ ကျွန်မတို့ဆေးကုပေးဘို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ကျောင်းကုန်းမြို့ ပေါ် တက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ ကောင်းလာပါတယ်။ ကျွန်မ က ဝမ်းသာလှစွာ သတင်းမေးသွားတော့--- ဆရာမလေးရေ…. ဝက်ကလေးတစ်ကောင် ဝယ်ပြီး နတ်စားလိုက်တာ နဲ့ ပြန်ကောင်းသွားတာတဲ့..။ ကျွန်မတို့ ဘာပြန်ပြောရမည် ပင် မသိခဲ့။
နောက်တစ်ယောက်က မနန့်ငွေသန်း အသက် ၃၀လောက်ရှိတဲ့အပျိုကြီး ကျွန်မဝိုင်းမှာ စာအလိုက်နိုင်ဆုံးမိုိ့ ကျွန်မ ချစ်ပါသည်။ ကျွန်မတို့ စားသောက်ရေးမှာ တစ်အိမ် တစ်ရက် လှည့်လည် စားသောက် ရပါသည်။ တစ်လကုန် ခါနီးထိ သူ့မှာ ကျွန်မတို့ကို ကျွေးခွင့်မရ၍ မျက်ရည်တွေ ဝဲနေခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့မှ သိရတာ သူ့ဖခင် နှင့်အဖိုးမှာ နူနာရောဂါသည် ဖြစ်နေပါသောကြောင့် ထမင်းကျွေးခွင့်မပေးပါတဲ့။ ကျွန်မကတော့ ထင်တော့ထင်သား နေ့လည် စာသင်ချိန်ပြီးတဲ့ အခါ လာရောက်ကြည့်တဲ့ အဘိုးအဘွားများကို ကျွန်မ လက်သည်း ခြေသည်း ညှပ်ပေးခဲ့ ပါတယ်။ အဲဒီ အထဲမှာ လက်သည်းခြေသည်းမပါတဲ့ ခြေချောင်းမပါတဲ့ ခြေထောက်တစ်စုံကို မြင်ရတော့ ထိတ်လန့်သွားခဲ့ဘူးတာကိုး။ နန့်ငွေသန်းအဖိုးပေပဲ။
တစ်ခါ သူ၏အဖေ ကပုဆိုးလေးကိုခြုံ ရေတွင်းနားမှာမှီရပ်လျက် ကျွန်မ စာသင်တာ လာကြည့်ပါတယ်။ ထိုစဉ် လေကအဝှေ့ ပုဆိုးက ရေတွင်းထဲ ပြုတ်ကျတော့ ထိုးဝါးများဖြင့် ပြန်ဆယ်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မတို့ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ရေကိစ္စ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ.. ဘယ်လိုမှ လုပ်စရာမရှိ…။ ချိုးကြရုံပါပဲ--- ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်။
နန့်ငွေသန်းက ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ထံတောင်းဆိုသည်မှာ ထမင်းကျွေးခွင့်။ သည်တစ်ခါတော့ခက်ပြီ။ ဘယ်လို လုပ်ရမည်မသိ။ နောက်တော့ ဥက္ကဋ္ဌ က ဆုံးဖြတ်ပေးသည် ထမင်းတော့မကျွေးရ… အကြမ်းသောက် ဖိတ်နိုင်သည်တဲ့။ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးသွားတဲ့ နန့်ငွေသန်း ကို ချစ်ခင်စိတ်နဲ့ ပဲ သူ့အိမ်ကို ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ ပဲကြီးလှော် ထန်းလျက်ခဲ ရေနွေးကြမ်း တို့ဖြင့်ဧည့်ခံပါတယ်။ တကယ်ပဲ အားပါးတရ စားပြ ခဲ့ရပါတယ်။ ထူးဆန်းသည်မှာ သူ့အမေ မှာ ဇနီးဖြစ်လျက် ရောဂါ မကူးစက် အကောင်းပကတိ။ သူတို့ပြောပြသည်မှာ ကရင်ရိုးရာ အရှောင် ထိတာပါတဲ့။ ကူးစက်ရောဂါ မဟုတ်ပါတဲ့။ သိစရာတွေ တော်တော်တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။
ထိုစဉ်က ကျွန်မတို့သူငယ်ချင်း နှစ်ဦး သင်္ကြန်မှာ ရွာလုံးကျွတ် မုန့်လုံးရေပေါ် ကျွေးတာကို တစ်ယောက်မှ ၁၅ကျပ်သာကုန်သည်။ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ လုပ်၍ ကန်တော့တော့ နတ်ကိုးကွယ်သောရွာမှာ အထူးအဆန်း ဝမ်းမြောက်ကြပါသည်။
နောက်ဆုံး ကြေကွဲစရာအကောင်းဆုံးက တစ်လပြည့်၍ အိမ်ပြန်ချိန်……. လော်စပီကာ အော်လံများထောင် ကာ နွားလှည်း နှစ်စီး ဖြင့်ဆရာမ နှစ်ယောက်တင်လျက် ငိုယိုကာ လိုက်ပို့ကြသည်မှာ ရွာလုံးကျွတ်။ ဆို့နင့်ကြေကွဲသော ခံစားချက်က ခုထိ ပူနွေးနေဆဲပါ။
ကျွန်မတို့ ဇီးငူဆိုတဲ့ အိမ်ခြေ ၃၀၀ကျော်ရှိတဲ့ ရွာကြီးမှာတစ်ည အိပ်ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်မတို့ စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်မှ လုပ်အားပေးဆရာမ များကို စုပေါင်းဂုဏ်ပြုပွဲလုပ်ပေးပါတယ်။
ထိုစဉ်မှာပဲ အခုနာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်သလို မုန်တိုင်းတစ်ခုက ဂွမြို့ကို ဝင်တိုက်ခဲ့သည်ကိုး။ ကျောင်းကုန်း သည်လည်း ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ဆရာမ လေးယောက်နှင့်အတူ ဝမ်းဆွဲဆရာမ လင်မယားတို့ တည်းအိမ် များကိုမပြန်နိုင်။ လေကပြင်းထန်လှသည်။ ငိုကြ ယိုကြ နှင့် ယောက်ယက် ခပ်ကုန်သည်။
အိမ်လေးမှာ သိမ့်သိမ့်တုန်နေပါသည်။ ကျွန်မတို့ သူငယ်ချင်းတွေ တိုင်ပင်၍ အဆောင်မှာ ရွတ်နေကြအတိုင်း ဓမ္မစင်္ကြာနှင့် ပဋ္ဌာန်းတရားတော် စုပေါင်းရွတ်ဆို မေတ္တာပို့ ကြပါသည်။ ငိုယိုနေသော လူကြီးများ တော်တော်လေး တည်ငြိမ်သွားကြပါတယ်။ အများစု နတ်ကိုးကွယ်ကြသောရွာမှာ သြကာသ ဘုရားရှိ်ခိုးပင် ရသူ မရှိခဲ့။
မနက်မိုးလင်းတော့ သွပ်လန် အိမ်ပြို သစ်ပင်များ လဲပြိုနေသာ ရွာကလေး ကို စွန့်ခွာ ခရီးဆက် ရပါတော့တယ်။ လှည်းလမ်းကပျက်ခဲ့ပြီမို့ ခြေလျင် ချီတက် ခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့ အိမ်ပြိုတာထက် ကျွန်မတို့ကို ရေလမ်းခရီးမှာ ဒုက္ခရောက်မှာ စိုး၍ မပြန်ကြရန် တားလျက် ထပ်ငိုကြပါသေးသည်။
ဖြူစင်သော မေတ္တာစစ်စစ် ကို ခံစားရရှိ ခဲ့ဘူးပါသလား---- ဟုကျွန်မအား မေးလာခဲ့လျင် ကျွန်မသည် ကျောင်းကုန်းမြို့၊ တိုက်ကုန်းရွာလေးကို လက်ညှိုးညွှန်ပြမိမှာ အမှန်ပါပဲ။ တစ်နေ့မှာ အရောက်ပြန်လာမယ် ထိုက်သင့်တာတွေ လုပ်ဆောင်ပေးမယ် အားခဲခဲ့သော်လည်း အနှစ်၂၈နှစ်သာ ကြာခဲ့ပြီး အကောင်အထည် မပေါ် ဖြစ်ခဲ့ပါ။ တွေးမိတိုင်း အားနာ နေရသည်။
အခုတော့ ပို၍ ဝေးကွာလှပါသည်။ ကံတရား၏ စီမံမှုဖြင့် ရောမ တွင်နေထိုင်ရပါသည်။ ကျွန်မ၏ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ Presentation တိုင်းတွင် မဆိုင်ပေမဲ့ မြန်မာ ပြည်မှ စေတီပုထိုးများကို အနည်းဆုံး ဆလိုက် နှစ်ချပ် လောက်တော့ထိုးပြပါသည်။ ဗုဒ္ဓသာသနာ ထွန်းကာရာ တိုင်းပြည်မှ လာကြောင်းတော့ သိစေခဲ့ပါသည်။
ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်မအား ဘာသာရေး အကြောင်း၊ ဝိပဿနာ အကြောင်း မေးသူ နိုင်ငံခြားသား မိတ်ဆွေများ ကိုပြောပြ မျှဝေခြင်း ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်မသည် အင်္ဂလိပ်စာအရေးအသား အတော်ကြီးတော့ မဟုတ်ပါ။ တတ်စွမ်းသလောက်ကြိုးပမ်း လုပ်ဆောင်ရင်း ချစ်လှစွာသော အမိမြေ ကိုဂုဏ်ယူချင် သူသာဖြစ်ပါ သည်။
ကျွန်မ၏ သန္တိသစ္စာ - Blog http://thantithitsar.blogspot.com တွင်မြန်မာပြည်မှ စေတီပုထိုးများ ဆရာတော်များ၏ နည်းပေးလမ်းညွှန် သွန်သင် ဆုံးမမှုများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဖြင့် ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အီတလီဘုန်းတော်ကြီး ဦးလောကနာထသည် ဓမ္မပဒ ကို အဂ်လိပ်လိုဘာသာပြန် ဖတ်ရှုလျက် ပြင်းထန်စွာ ယုံကြည် ကိုးကွယ်သော ရိုမန် ကက်သလစ်ဘာသာဝင် ဘဝမှ ဗုဒ္ဓဘာသာ အဖြစ်ကူးပြောင်း ရောက်ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးလောကနာထ ကိုအကြောင်းပြုပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကူးပြောင်းလာသူ အနောက်တိုင်းသား အမြောက် အများ ပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်.. နောက်သူ့အကြောင်းရေးပါအုံးမယ်။
သည်လိုပေါ်ထွက်လာနိုင်ခဲ့တာကို စဉ်းစားနိုင်ခဲ့လျှင် ကျွန်မ ပြန်မရောက်ဖြစ်ခဲ့သော ဘာမှ ပြန်လည်း လုပ်ဆောင် မပေးနိုင်ခဲ့သော ချစ်လှစွာသော အမိမြေ မှ မေတ္တာပတ်ဝန်းကျင် တိုက်ကုန်းရွာကလေးသည် ကျွန်မအား ခွင့်လွှတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်နေပါတယ်။
(မြန်မာပြည်မှာ တိုက်ကုန်းရွာ များစွာ ရှိနေပါတယ် ပြည်ပသာသနာပြု အပြင် ပြည်တွင်းသာသနာပြုများပါ လိုအပ်ကြောင်း ဖော်ပြချင်လို့ပါရှင့်။)
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 4:09 PM0မှတ်ချက်ရေးရန်
ခေါင်းစဉ် ကျွန်မ ရဲ့ သံဝေဂများ, ပညာအလင်း
ကမ္ဘာ့နေရာအသီးသီး ကိုရောက်ရှိနေကြသော AIT Alumni မောင်နှမများရှင့်...
တခြားသော ဘာသာများနဲ့ သီးခြားရပ်တည် ခွင့်ရခဲ့ပြီ ဖြစ်တဲ့ ဘုရားခန်းလေးမှာ ဘုရားဝတ်ပြုရုံသာ မက ဘာသာရေး လှုပ်ရှားမှုလေးတွေ တွေကို စတင် ပြုလုပ်နိုင်နေ တဲ့အချိန်ကာလ သမယ မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်သူချစ် ဆရာတော် ရဝေနွယ်(အင်းမ) ကို ဆွမ်းဆက်ကပ် လှုဒါန်းခွင့် ရတာ ဝမ်းမြောက်ကြည်ညိုစရာပါပဲ..။ ဘုရားခန်းအသစ် ကလေးနဲ့ ဗုဒ္ဓ စာကြည့်တိုက် ကိုလည်း မြင်တွေ့နိုင်ကြပါတယ် ။ ကျွန်မတို့ တုံးက Korea House မှာလုပ်ကြ ရတာကိုး။ ဓာတ်ပုံများ ကိုကြည့်ရှုကြည်ညို သာဓုခေါ် နိုင်ကြပါစေ လို့ဆုတောင်း မေတ္တာပို့သ လိုက်ပါတယ်။
ဆွမ်းဆက်ကပ်ရန် ပြင်ဆင်ထား ပုံ
ဆရာမကြီး Prof: Dr.Khin Ni Ni Thein ဆွမ်းကပ်လှူ နေတာဖြစ်ပါတယ်။
တရားတော် ချီးမြှင့် ပေးတော်မူပါတယ်။
Here I attached the photos of today activities. I am not used to write Myanmar font and so, would you mind if you send this post by your name and your news? As you are so much familiar with the AIT cooking method(one student, one curry or rice pot if they could), I do know that you could reveal it well. We have been in great happiness to do the great donation with the unity of the Myanmar Buddhist Association.
Thank you for your kind remembrance to us!
Cherry Myo Lwin
ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းဥက္ကဋ္ဌ မချယ်ရီမျိုးလွင် (Energy) ပေးပို့လိုက်တဲ့ စာလေးမှာပါတဲ့ AIT cooking Method ကိုဖတ်ရင်း Assignment Institute of Technology လို့ နာမည်ပြောင်ပေးထားတဲ့ AIT ကျောင်းသားဘဝကို အလွမ်းပြေနိုင်ကြပါစေ။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 4:36 AM2မှတ်ချက်ရေးရန်
On the behalf of the AIT Myanmar Buddhist Association, I would like to share
information with all.
Just now I got the contact from our AIT alumni that tomorrow, 10th, August,
Sayadaw Ya-Wai-Nwe(Innma) will go to one of the Pagodas in Bangkok and on
the way, Sayadaw will arrive AIT at lunch time. So, we, Myanmar, AIT Myanmar
Buddhist will plan to donate rice and curry (ALMS FOOD) and other
requisites to two monks.
Anyone who would like to meet Sayadaw Ya-Wai-New (Innma) in the
AIT Buddhist Prayer Room could come around
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 3:58 PM0မှတ်ချက်ရေးရန်
Dear Dhamma Brothers and Sisters in Bangkok, Thailand
Sitagu Sayadaw, Dr. Ashin Nyanissara, will be in transiting in Bangkok on the way of his holy mission of Buddhism propaganda.
There will beaBuddhism Dhamma talk and teaching by Sayataw on the following Sunday evening.
Venue: Hall of Fame : C Block ABAC Assumption University
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 1:29 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 4:30 PM0မှတ်ချက်ရေးရန်
Annatta Luckhana Thote MyanamrZawgyi-1
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 8:36 PM0မှတ်ချက်ရေးရန်
အခုချိန်ခါကာလ သမယကတော့မေမေတို့ အတွက် မင်္ဂလာ အပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ မီးမီးကလည်း တရားစခန်း သုံးရက်ဝင်မယ်လုပ်ပြီးမှ (၇)ရက်သီလရှင် ၀တ်ဖြစ်သွားတာ မီးမီး ၆ဘာသာဂုဏ်ထူးထွက်တာထက်ကိုမေမေ တော်တော် ဝမ်းသာနေပါတယ်-ဂုဏ်ယူပါသည်။-မစန္ဒာဝတီပေါ့နော်---သည်ကြားထဲသားသားကလည်း ၁၀-ရက်တရားစခန်းဝင်သွားတယ်ဆိုတော့ မေမေ့မှာ ရေကြည်ချမ်းမြ တစ်ပေါက်ကျသို့ ဆိုတာလို အေးမြမှုတွေ လွှမ်းခြုံလို့သာနေပါတော့တယ်-သာဓုဆိုတာကတော့ ရင်ထဲမှာ ပဲ့တင်ထပ်နေတော့တာပေါ့-ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ကလေးတို့ရေ---
သည်ထဲမှာ မေမေ ကအညံ့ဆုံးဖြစ်နေပါတယ် တရားစခန်းကို ၂-ညအိပ် ၃-ရက်သာဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရောမမြို့ကနေ ၂နာရီကြာအောင်သွားရတဲ့တောထဲမှာပါ..မေမေအရင်သွားနေကျ ထိုင်းနိုင်ငံ မှ တောရဆောက်တည်တဲ့ ဆရာတော်အာဂျန်ချား ဥပနိဿယခံ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေထဲက တစ်ကျောင်းအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ မနက်စောစော-၅နာရီ ထတရားထိုင် ဆွမ်းစားဆောင်မှာချက်ပြုတ် ဆွမ်းကပ် ဆေးကြောသန့်စင်ကြမ်းတွေလည်းတိုက်ပေါ့။
ကျောင်းကိုမကြာခင်ကြွရောက်လာတော့မဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက ဗုဒ္ဓ ရုပ်ပွားတော် ထားရှိ ပူဇော်ဘို့မြေကျင်းတူး တာတွေ အမျိုးသမီးယောဂီဆောင်ဆောက်လုပ် နေတာတွေ မှာ မြေကြီးဝင်ပေါက် လုပ်အားပေးခဲ့တာ တစ်ပျော်တစ်ပါးပါပဲကလေးတို့ရေ..။
ထိုင်းဘုန်းတော်ကြီးလေးတွေက အင်ဂျင်နီယာလိုပါပဲ ကျောင်းထဲက အဆောက်အဦမှန်သမျှ ကိုယ်တိုင်ဆောက်လုပ်ကြတာပါ။ အဲသည်နေ့မှာတော့ လုပ်အားပေးကြတာ မေမေ ကမြန်မာပေါ့ အီတလီ တွေ ရယ် သီရိလင်္ကာ ရယ် ထိုင်းတွေရယ်-ကျောင်းထိုင်ဘုန်းဘုန်းက အင်္ဂလိပ်လူမျိုးပါ။ လူမျိုးတွေကွဲပြားနေပေမဲ့ ဗုဒ်္ဓရဲ့မေတ်္တာရိပ်အောက်မှာ ရည်ရွယ်ချက်တွေ လုပ်ဆောင်မှုတွေတူညီစွာ ကုသိုလ်အတူပြုခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
မေမေကတော့ အနောက်တိုင်းသားတွေရဲ့ ဘာသာရေးကိုချဉ်းကပ်ပုံလေးတွေ သူတို့လက်တွေ့ဘ၀ ထဲကပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းကြတာတွေကိုစိတ်ဝင်စားနေမိပါတယ်---ဆရာတော် ဦးဇောတိက ရဲ့တရားတော်တော်တော်များများမှာလည်း ပါပါတယ်။ အခုလူတွေတော်တော် များများ ခံစားနေရတာ မပျော်တဲ့စိတ် ပါပဲကလေးတို့ရေ--ဆောက်တည်ရာမဲ့ ခိုကိုးရာမဲ့ စိတ်အတွက် Prozac, Valium စိတ်ငြိမ်ဆေးများ သုံးစွဲကြပါတယ်-----
အဲသည်ဆေးတွေ က မေမေတို့တရားထိုင်ပြီးချိန်မှာထွက်လာတဲ့ အအေးဓါတ်မျိုးနဲ့တူတယ်လို့ ဆရာတော်ဘုရားဟောကြားဘူးတယ်ကလေးတို့ရေ..။ အမှန်မှာကတော့ တရားယောဂီ ရဲ့အအေးဓါတ် ကတော့ ကိလေသာ ကင်းစင် လို့ထွက်ပေါ် လာတဲ့ သဘာဝဟော်မုန်းဓာတ်တစ်မျိုးပါ--
Endorphin(A neurochemical occurring naturally in the brain and having analgesic properties) လို့ခေါ်ပါတယ်။ နာကျင်မှု ကိုသက်သာစေတဲ့ အတွက် Morphine လိုအာနိသင်ရှိပါတယ်-(Endogenous+ Morphine) ကိုပေါင်းထားတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့ကလေးရေ-တရားအားထုတ်ပြီး အနာရောဂါတွေဘာတွေသက်သာတာလည်းသည်သဘောတရားပါပဲကလေးတို့ရေ..-
အဲသည် ဆေးနဲ့တူအောင်ဖန်တီးထားတဲ့မူးယစ်ဆေးတွေကိုသောက်သုံးတော့စိတ်ထဲပျော်သလိုလိုဖြစ်ရတာပေါ့လေ..အပျော်အတုပေါ့..အထီးကျန်တာတွေ စိတ်အလိုမပြည့်တာတွေ အတွက် တည်မှီရာ ရှာမတွေ့ကြတာ သနားဘို့ကောင်းလှပါတယ်။ ဆရာတော်ဦးဝိဇယ စကားအရဆိုရင်တော့စိတ်နေစရာအိမ်မရှိလို့ဖြစ်တာပါ။ဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒာဓိက ကရဲ့သတိဆိုတဲ့နေအိမ် တရားတော်မှာလည်း သည်လိုပဲ ဟောကြားထားတော်မူပါတယ်။
အခုမေမေဖော်ပြထားတဲ့ကဗျာလေး ကတော့သည်လိုဘ၀တွေကိုထင်ဟပ်ပြထားတာပါ။ဖတ်ကြည့်ပါအုံး လေ။ကဗျာရေးတဲ့သူကတော့ Gus Hales စစ်ပြန်တစ်ဦးပါ အင်္ဂလန် မှာလည်း ရောမ ကလိုမျိုး အမရ၀တီ--ဆိုတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိပါတယ်..ဆရာတော်အာဂျန်ချား--ရဲ့တပည့် ဆရာတော် အာဂျန်သုမေဓော (အမေရိကန်လူမျိုး)တည်ထောင်ထားတာပါ..
၁၉၉၆ကတည်းက မိသားစုတရားစခန်း တွေဖွင့် မိသားစုလိုက် ကလေးတွေပါခေါ် ပြီးတရားအားထုတ်ကြတာ- နောက်မှ အကျယ်တ၀င့်ရေးပါအုံးမယ်။ အဲသည်စခန်းမှာ Gus Hales ကသူ့ဘ၀အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေထားတဲ့ကဗျာလေးပါ..အရေးအသားလေးက ကာရန် -Rhythm ရစ်သမ်လေးနဲ့ အလွယ်တကူနားလည်နိုင်ပါတယ်-
သည်ကဗျာလေးကိုဖတ်ပြီးမေမေ တို့သည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာများ အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းကို အလွန် အရတော်ပေစွလို့ ကျေနပ်တန်ဘိုးထားမိပါတယ် ။ မေမေတို့လည်း သည်လိုသာမဟုတ်ခဲ့ရင် Mickey-Monkey လိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ် … Monkey-Mickey ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် အင်မတန်အဘိုးထိုက်ရတနာ-သာသနာအဆုံးအမတွေကို Harley Street (A street in central London where the consulting rooms of many physicians and surgeons are located) သွားစရာမလိုတော့ဘူးရယ်လို့တန်ဘိုးဖြတ်နေမိမှာလား မပြောတတ်ပါဘူးကလေးတို့ရေ..။
Deep in the jungle of Asia
Past the wide open Indian plain
There livesateenage monkey and Mickey is his name.
Now Mickey has this monkey mind that forever jumps about
It’s often full of fear and dread. and Its always full of doubts
If Mickey’s given the simple task
He’ll only start to panic
He’ll rant and rave an scream and shout
He really is quite manic
He bangs his chest and stamps his feet
And throws coconuts on the floor
But the really isasad old sight
When he shouts, I can’ t take it any more
You see Mickey has this type of mind
That forever seeksathrill
He’ll parachute and bungee jump
His mind is never still
One minute he’s as high asakite
The next he’s in the dumps
And he plays that awful music
Thumps! and thumps! And thumps
He plays new wave music and acid house
And punk and northern soul
Heavy metal and rhythm and blues
And rap and rock and roll
No wonder Mickey’s all stressed out
His mind can never rest
It makes him hyperactive
He really isapest
But I feel sorry for poor old Mickey
He hasn’t gotahope
The only way he gets through the day
Is by taking drugs and smoking dope.
So that’s Mickey’s life story
But can anybody help him
Will he ever smile again
Wellavery compassionate Buddha
Said to Mickey, “ You need to livealot calmer
You don’t need Prozac or Valium pills
You needamassive dose of Dhamma
But the first thing you must try and do
Is at least just level out
Do some walking meditation
And you’ll end your fear and doubt
Now just take twenty paces
Then turn around and takeadeep breath
Then twenty paces back’
So Mickey started walking
He’d walk both day and night
He would walk to try and find some peace
And end his mental plight
But it wasn’t easy for Mickey
It was his hardest ever decision
But he’s given up dope, and given up booze
And he’s given up television
He’s given up loud music
No more pop and rock and punk
Now he listens to the sweetest tones
Ofachanting Buddhist monk
Then one day the penny dropped
Now Mickey really understood
That he created all his suffering
Now he wants to do some good
For Mickey’s nowavery different Monkey
Who loves swinging through the trees
He’s always quite contented
He really is at ease
He’ll help anyone who’s injured
And anyone who’s ill
He’s given up bungee jumping
Now helping is his thrill
But if Mickey can be remembered
For just one redeeming feature
It’s that he truly showed compassion
Just follow the Buddha’s foot steps
And findawalking track
You don’t need expensive councilors
Or some Harley street physician
Just take your example from Mickey
And you will livealot calmer
Then throw away your potions and pills
AND TAKE A MASSIVE DOSE OF DHAMMA
Gus Hales and his poems have become something ofahit at the summer camps. Over the years, Gus has shared with the camp some of his personal journey from beingaparatrooper in the Falklands war.At last year’s Camp he showedafilm of him going back to Falklands, describing his story, along with other veterans who have suffered post-traumatic stress disorder.The year before, Gus was givenaBuddha image blessed by the Sangha and family campers and took it back to Mount Longdon where ho lost many of his friends who where the same age as his daughter(17) and many of the young people on the camp.
You can read more about Gus and the video at www.family.amaravati.org/2008/summer#falk